Maxkamad ku taalla South Africa oo lasoo taagay Burcad lagu eedeeyay dilka laba Ganacsato Soomaaliyeed “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Maxkmad ku taalla Magaalada Polokwani ee Dalka Koonfur Afrika ayaa lasoo tagay laba nin oo South African ah oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dil loogu geystay laba wiil iyo abtigiisa Soomaali ah oo ka wada shaqeynayay hal Dukaan ay ku lahaayeen Tuulo ku taalla Gobolka Limpopo ee K/Afrika.
Eedeysanayaasha oo lasoo xiray markii uu falka dhacay oo ahayd Sanadkii 2013 ka waxay socotay dacwadooda muddo seddex sano ah, iyadoo dhowr jeer oo hore racfaan ka qaateen waxaana xoogga saaray Jaaliyadda Gobolka Limpopo,Ehalada labada wiil ee la dilay iyo Safaaradda Soomaalida ee Pretoria in cadaaladda la horkeeno kuwii ka dambeyay dilka dhalinyaradan.
Labada Marxuum waxaa la kala oran jiray Cabdisalaan Nuur Muxdiin iyo Maxamed Xasan Muxudiin waxaana lagu dilay toorey kadib markii lagu qabtay Bastoolad xilli fiid ah oo ay ka ganacsanayeen dukaan yar oo ay ku lahaayeen Tuulo dhacda duleedka Magaalada Polokwani.
Dhageysiga Dacwadan oo socday muddo sedex maalmood ah ayaa waxaa ka qeybgalay Ehalada labada Marxuum,Qaar ka mid ah Ganacsatada iyo Jaaliyadda Gobolka Limpopo,Safiiirka Soomaaliya u fadhiya Wadamada Afrikada Koonfureed,Qunsalka Safaaradda iyo dad K/Afrikan ah oo qaarkood daris lahaa Dukaanka labada .
Marxuum,dhageysi kadib ayaa waxaa qirtay mid ah Burcadii geystay falkan inuu gacantiisa ku dilay C/Salaan Nuur Muxudiin iyo Maxamed Xasan Muxudiin halka Eedeysanaha kale aan lagu helin wax cadeyn ah.
Qaar ka mid ah dadki ka qeybgalay ayaa Wariyaha Warbaahinta Qaranka ugu soo warama Dalka K/Afrika,C/qaadir Axad oo la hadlay ayaa sheegay inay filayaan in Eedaysanayaasha Cadaallada la horkeeno.
Danjire Jamal Barrow iyo Qunsul Maxamed Cali Mire (Nabadoon) oo iyagu safar ugu yimid inay ka qeybagalaan Dacwadan ayaa Safiirka Jaaliyadda Soomaaliyeed dardaaran u diray.
“Ujeedada aan u nimid aniga iyo Qunsulka inaan ka qeybgalno Maxkmad ka bilaabanaysay Polokwani oo sedex sano kahor lagu dilay laba Ganacsato,waxaan ugu mahadcelinayaa Jaaliyadda Soomaaliyeed ee kasoo qeybgashay,waxaana ku dhiiragalina inay sidaasoo kale dambiyada laga galo inay geeyaan Saldhigyada oo ay ka harin”ayuu yiri Danjire Jamal Barrow.
Dilalka loogu geysto K/Afrika Ganacsatada Soomaalida ayaan intooda badan Maxkmad lala tiigsan Dambiilayaashii falka ka dambeyay,waxeyna Jaaliyadda Soomaaliyeed eed dusha kaga tuurtaa Dowladda K/Afrika inay Xabsi u taxaabin Dambiilaha halka Dowladduna sheegto in Soomaalida dabagalin oo aan soo xaadirin Maxkamadda sidaa darteed la fasaxo Burcadda.